London: Maxaa derbi jiif ka dhigay hooyadan iyo wiilkeedan Soomaalida ah? | Somalia News
Sannadkii 2017-kii, nin qoraa ah oo madaxa bannaan oo lagu magacaabo, Tom de Castella, wuxuu ogaaday Hooyo iyo wiilkeeda oo ku nool kursi dheer oo ku dheggan waddo marta Koonfurta London.
Wuxuu ogaaday in xilligaas uu arkayay in laba sano ay meesha ku noolaayeen. Maxay tahay sababta uusan qofna u sameynin arrin lagu cawinayo? Maxay tahay sababta uu qof kasta u aqbalay sidan in ay caadi tahay? Markasta oo uu sii baarayba, waxay ku sii noqoneysay la yaab.
Wuxuu sheekada ku billaabay
Wax wayn oo ku duuban bacaha biyaha celiya oo dhalaalaya. Waxay fadhisaa bartamaha marinka dadka. Waxaan is weydiiyay, ma qalab muusiko oo duugoobay baa? Alaab reer loo keenay oo in la furo larabo miyaa?. Wax yar ka dib bacdii waxay bilowday in ay dhaqaaqdo, gacan ayaan bannaanka usoo baxday si ay bacda u furto, waxaana ka soo baxay nin iyo haweeney ku duuban bustayaal oo ku fadhiya kursi.
Kor meer uu sameeyay Maamulka Guud ee London iyo hay’adda St Mungo’s, waxay ku ogaadeen in 3,289 oo qof ay seexdeen jidadka London ugu yaraan hal mar, muddadii u dhexeysay October iyo December ee sannadkii la soo dhaafay, Waa tiradii ugu badneyd tan iyo markii uu diiwaankan bilowday.
Balse rubuc ka mid ah dadka jidadka London seexda, waxay halkaas seexanayeen ugu yaraan laba sano oo xiriir ah.
Waxaan sameeyay hubin iyo inaan ogaado sheekadii hore ee labadan qof ee kursiga ku fadhiya. Muddo dhowr sano ah waxay ku noolaayeen guri uu leeyahay Golaha Deegaanka oo ku yaalla Battersea.
Balse ka dib markii uu dhintay qof ka mid ah qoyska, waxaa lagu yeeshay deyn badan oo kirada ah. Bishii February, 2014-kii, Golaha deegaanka ee Wandsworth ayaa xoog uga soo saaray gurigii ay ku noolaayeen.
Ilo ku dhow Golaha waxay sheegeen in guri ku meelgaar ah la siiyay, maalintii laga soo saaray midkii ay ku noolaayeen, Laakiin hooyadan iyo wiilkeeda maba aysan tagin meeshii loo diyaariyay.
Qofna kuma baraarugsaneyn waxa xiga ee dhici karay.
Kursigii ugu horreeyay ee ay ku noolaayeen wuxuu yallay waddo dhowr boqol oo mitir u jirta meesha hadda ay joogaan.
Bishii December ee 2014-kii, waxaa la dhigay cisbitaal ka dib markii uu qabow ku dhacay – intii ay cisbitaalka ku jireen, Golaha Deegaanka wuxuu meesha ka qaaday kursigii ay ku dul seexan jireen, iyagoo sheegay inuu yahay mid ay “dib ugu soo noqon doonaan”.
Markii hooyada laga soo saaray cisbitaalka – wiilkeeda wuu ku sii jiray muddo dheer – Waxay toos u aaday kursigii, waxayna aragtay in meeshii uusan oolin.
Ka dib waxay u wareegeen kursi kale oo dadweyne oo ku dheggan Balham.
Wuxuu wiilka aalaba akhriyaa buug ama wuu shanleysanayaa. Hooyadana waxay eegtaa jidadka iyo dadka. Ficil ahaan, way adag tahay in la fahmo. Sidee buu kursigaa yar u qaaday laba qof in ay ku seexato? Iyagoo fadhiya miyey hurdaan? (Haa waa sidaa. Waxay ku tiirsadaan barkiimo, waxayna lugaha saartaan boorsooyiin.)
Xilliyada qabowga uu aadka u badan yahay, sidey isku kululeeyaan ama xilliga kuleylaha sidey isku qaboojiyaan? Buuqa ka warran? Waxaa jiro gawaari hoon yeerineysa, sawaxanka basaska iyo buuqa kale ee habeen iyo maalinba jira.
Ka dib dhowr goor oo aan la sheekeystay, waxaan is lahaa English-ka si fiican uma garanayaa. Hadda waxaan aamin sanahay in fahamkooda uusan dhib ahayn. Taa bedelkeeda wuxuu walwalka yahay in aysan garaneyn sidii ay xaaladdooda u fahmi lahayeen, iyo waxyabaha diyaarka u ah.
Waxay ii sheegeen in nolosha bannaanka iyo midda guryaha ay isku mid yihiin xilliga qaboobaha. Iyo in meel kasta ay qabow tahay xilligaas. Muxuu yahay farqiga u dhexeeya guri iyo kursi? Yaa u baahan sariir? way adag tahay in taas lagu murmo. Ma ogyihiin in qaabka ay u nool yihiin uu halis ku yahay cafimadkooda, waa walwal kale.
Saacad ka dib waxaan tagay kafateeriyada Al Jazeera oo ku taalla Streatham, halkaas oo Soomaalida ay ku badan yihiin. Kooxo rag ah oo suudad xiran oo qoorta ay maryo u saaran yihiin ayaa meesha fadhiyay. Waxay cabayeen kafee iyo shaah rinji ah.
Waxaa la ii diray Cabdicasiis Xaashi, oo ah nin sheekadooda si wanaagsan u garanaya. Wuu u tagay hooyada iyo wiilkeeda, balse wey diideen in ay dhageystaan, sida uu sheegay.
Waxaa la i tusay warbixin Af Soomaali ah oo laga sameeyay oo la geliyay YouTube-ka. Waxaa lagu wareystay bulshada Soomaalida ee xaafadda Tooting.
Mid ka mid ah haweenka lala hadlay waxay tiri: “Aad baan ula murugooday arrintan. Wax kasta waan isku deynay – way diiday in ay dhageysato taladeena.”
Ninkii ila socday madaxa ayuu ruxay. Ma jiro wax badan oo bulshada Soomaalida ay sameyn karto, ayuu yiri. Wuxuu ka walaacsan yahay saameynta qaabka ay u nool yihiin ay ku yeelaneyso caafimaadka maskaxdooda. “Haddii aniga aan ahaan lahaa oo noloshan aan ku jiri lahaa, mar hore ayaan dhiman lahaa. Ma garanayo sida ay ku badbaadaan.”
Waxaan weydiiyay, waxa la sameyn karo. Si degdeg ah ayuu u jawaabay wuxuuna yiri: “”Waxay ahayd in halkan laga raro si bini-aadamnimo ah. Dadka way xanuunsan yihiin runtii.”
Waxaa suuragal ah in wax yaabaha loo soo bandhigay “aysan buuxin karin bahidooda” ayey tiri Hannah Gousy, maamulaha arrimaha sharciga ee hay’adda Crisis.
Waxaa suuragal ah in ay noloshan dhibka ah ka doorbidayaan in guri ay la wadaagaan qof kale oo suuragal ay tahay in walwal ay ku abuurto. Waxaa dhici karta in aysan aaminsaneyn dadka kale ee guri la’anta ah iyo hay’adaha u sheegaya in ay caawinayaan.
Gary Rycroft, oo ah sharci yaqaan ayaa yiri: Waa xadgudub haddii guri qof kale oo aan laguu fasixin ku noolaato.” Balse kursi dadweynaha ka dhexeeya, ma loo arki karaa hanti uu qof kale leeyahay? “Markasta waxaa jiro qof leh dhulka. Haddii uu kursi dheer ku sameysto qof kale, waa in uu dareemo in dhulkaas uu xaq u leeyahay. Dhulka ka dhexeeya dadweynaha, wuxuu noqon karaa mid uu maamulka deegaanka leeyahay ama qeyb ka ah waddo dadweyne.
Sida sharciga UK uu yahay, qofka maskaxdiisa ma shaqeyneyso haddii uusan raaci karin afartan arrin: Faham, xusuusasho, hadlid, iyo qiimeynta macluumaadka.
Waxaan la hadlay laba dhinac oo kala duwan. Waxay sheegeen in qoyskan aanan lagu arak wax halis ah oo la xiriira xanuun dhanka maskaxda ah. Kursigan dadweynaha ka dhexeeyana waxay u arkaan sida guri ay iyagu leyihiin.
Golaha deegaanka ee Wandsworth warqad ay xoogaa ka dib soo direen waxay ku sheegeen in hooyada iyo wiilkeeda, “uu Goluhu siinayay meel ay degaan kuwaas oo la qalabeeyay, lana qurxiyay, oo ay ka mid tahay meeshii ay degganaan jireen, way diideen dhammaan xitaa iyagoo aan soo arag.”
Waxaan doonayay in xal loo helo waxa nolosha ah ee ay doonayaan, balse way sii adkaaneysay in la fahmo.
Waxay u muuqdaan in ay ku faraxsan yihiin nolosha kursigan. Dhaqankoodu ma ahan mid bulshada dhib ku ah, maamulkana way aqbaleen in halkooda ay deganaadaan, iyo wax kasta oo bulshada deegaanka ay u diyaariyaan in ay noqoto in si wanagsan loola dhaqmo, loo naxariisto, loona dulqaato.
This post first appeared on BBC Somali - Somali. Read the http://www.bbc.com/somali/war-50220977original article
Previous articleSomalia’s path to stability – Brookings Institution
Next articleSomali who was target of threats wins US municipal election – The Associated Press